बजेटबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले के-के भने ? | suryakhabar.com
Home आर्थिक बजेटबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले के-के भने ?
बजेटबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले के-के भने ?
on: २० जेष्ठ २०७५, आईतवार १५:१७ In: आर्थिकTags: बजेटबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले के-के भने ?No Comments
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी, व्यावहारिक र वस्तुपरक रहेको बताएका छन् । विपक्षी दलका सांसदहरुले भने बजेट यथार्थपरक नभएको भन्दै आलोचना गरे ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्षका सांसदहरुले बजेट वस्तुपरक रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
सांसद प्रभु शाहले आगामी आवका लागि प्रस्तुत बजेट वस्तुपरक र यथार्थमा आधारित भएको र बजेटले लिएको लक्ष्य उपयुक्त भएकाले कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले शहीद परिवारको जीवनयापन सहज बनाउनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
विगतमा राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गरिएको र देखाउनका लागिमात्रै केही कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै उहाँले वर्तमान सरकारले यथार्थवादी बजेट प्रस्तुत गरेको दाबी गरे ।
सांसद राजकिशोर यादवले सरकारले ल्याएको बजेटमा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा विज्ञापनमा भनिएजस्तै ‘हात्ती र हात्ती छाप चप्पल’ जस्तो भएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय, प्रदेश र संघबीचमा बजेटले तालमेल नगरेको भन्दै बजेट संघीताको मर्म भन्दा बाहिर रहेको आरोप लगाए ।
आगामी आवका लागि प्रस्तुत बजेटमा नेपाली काँग्रेसले जितेको स्थानीय निकायमा पक्षपात गरेर बजेट विनियोजन भएको भन्दै उहाँले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे । सांसद कोइरालले पूर्व प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालालाई बजेटले भूलेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन माग गरे ।
सांसद सरिता गिरीले आर्थिक नीति तथा लक्ष्य प्राप्तिका हिसाबले बजेटमाथि शंका रहेको भन्दै केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाको चरम विन्दुमा रहेको बजेट सामाजिक न्यायका विरुद्ध पनि भएको बताए ।
सांसद बिन्दा पाण्डेले सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिदर आठ प्रतिशत पु¥याउने, आगामी आव भित्र पाँच लाखजनालाई नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, सिपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, निर्यातजन्य उद्योगको विकास गर्नेजस्ता विषय सकारात्मक र प्रभावकारी रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
सांसद पुष्पाकुमारीकर्ण कायस्थले बजेटले सबै क्षत्रेलाई उत्तिकै महत्व दिएको भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद प्रकाशमान सिंहले दुई तिहाई मत प्राप्त वर्तमान सरकारले बजेटमा ‘निराशाको पोको’ मात्रै ल्याएको आरोप लगाउनुभयो । खुला अर्थनीति अंगालेको मुलुकमा निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै उहाँले सरकारको व्यवहार प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरित छ भने ।
Tags: बजेटबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले के-के भने ?
लाभग्राही सूचीमा कति घरधुरी थपिए ?
२३ श्रावण २०७७, शुक्रबार ०९:३१
२२ श्रावण २०७७, बिहीबार २०:१०
एन आई सी एशिया बैंक र सिजी मोटोकर्प बीचे समझदारी
२२ श्रावण २०७७, बिहीबार १९:४७
अमेरिकी राष्ट्रपती ट्रम्पले गरे टिकटकबीरुद्ध कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर
२० जेष्ठ २०७५, आईतवार १५:१७